သားသမီးယူမည္ဆိုလ ွ်င္ – MATE
သားသမီးယူမည္ဆိုလ ွ်င္ September 11, 2018 အဝလြန္ျခင္းနဲ ့ကေလးရနိုင္ေခ်
“အဝလြန္ျခင္းနဲ ့ကေလးရနိုင္ေခ်” အဝလြန္ျခင္းဟာ ကေလးရႏိုင္ေခ်ကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးသလား။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဝလြန္တာဟာ ကိုယ္က်န္းမာေရး၊စိတ္က်န္းမာေရးကို အနည္းနဲ႕အမ်ား ထိခိုက္ေစတဲ့အေၾကာင္း အားလုံးသိထားျပီးသားျဖစ္မွာပါ။ဒီေဆာင္းပါးေလးမွာေတာ့ အဝလြန္ျခင္းနဲ႕ မ်ိဳးေအာင္ျခင္း (ကေလးရႏိုင္ျခင္း)အၾကား ဘယ္လိုဆက္စပ္မႈရွိေနသလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ပါ။ BMI လို႕ေခၚတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ အညႊန္းကိန္း ၃၀ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနတာကို အဝလြန္တယ္လို႕ ေယဘုယ်သတ္မွတ္ပါတယ္။ အဝလြန္ျခင္းဟာ သားဥေႂကြျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ေပး႐ံုသာမက ပံုမွန္သားဥေႂကြတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေတာင္မွ ကေလးရဖို႕ကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳပါတယ္လို႕ သုေတသနအသစ္ေတြက ဆိုပါတယ္။ အေတာ္ေလး အ၀လြန္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ပံုမွန္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဒါမွမဟုတ္ ပံုမွန္ထက္ေတာ့ နည္းနည္းပိုဝတယ္၊ဒါေပမယ့္ အဝမလြန္ဘူးဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္တဲ့အခါ မ်ိဳးမေအာင္ဖို႕ (ကိုယ္ဝန္မရဖို႕) အခြင့္အေရး ၄၃ ရာခိုင္ႏွုန္းပိုမ်ားေနတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ …
သားသမီးယူမည္ဆိုလ ွ်င္ September 6, 2018 ကလေးမရနိုင်တဲ့အကြောင်း ‘၈ ချက်’
“ကလေးမရနိုင်တဲ့အကြောင်း ၈ ချက်” သင်အိမ်ထောင်ကျတာကြာပြီလား??? ဘာကြောင့်ကလေးမရနိုင်သေးတာလဲ??? ကျွန်မကို စုံတွဲတော်တော်များများက“ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ အိမ်ထောင်ကျတာလဲကြာပြီ ဘာလို့ကလေးမရနိုင်သေးတာလဲ” ဆိုပြီး ခဏခဏမေးတတ်ကြပါတယ်။ ယခုဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းရင်း ‘၈ ချက်’ ကြောင့်ဖြစ်နေနိုင်မလားဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။ (၁) သေချာအချိန်ပေးပြီးမကြိုးစားခြင်း အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမှာက ကလေးရဖို့အတွက်သင်ဘယ်လောက်အချိန်ပေးခဲ့ပြီးပြီလဲဆိုတာပါ။ တစ်ခုသိထားရမှာက လက်ထပ်ပြီးပြီးချင်းလူတိုင်းကလေးမရနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ စုံတွဲတွေရဲ့၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က တူတူနေပြီး ၆လလောက်ကြာမှကိုယ်ဝန်ရတတ်ပါတယ်။ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့၁နှစ်အကြာလောက်မှ ရကြပါတယ်။ ဒါတောင် အမြဲအတူတူနေဖြစ်တဲ့ စုံတွဲတွေကိုဆိုလိုတာပါ တစ်နေရာစီခွဲနေတဲ့စုံတွဲတွေကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆိုဘယ်အချိန်မှာဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးသင့်လဲဆိုတော့ အသက်၃၅နှစ်အထက်ဆို ၆လ ၊ အသက်၃၅နှစ်အောက်ဆို ၁နှစ်လောက်အနည်းဆုံးကြိုးစားကြည့်ပြီးလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ (၂) မမျိုးဥ မကြွေခြင်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် မျိုးဥကြွေဖို့လိုပါတယ်။ မျိုးဥမကြွေဘူး ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ့အမျိုးသမီးဟာ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ချို့ရောဂါတွေကြောင့် အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရမ်းဝလွန်း …
သားသမီးယူမည္ဆိုလ ွ်င္ August 16, 2018 “မ” မျိုးဥကြွေခြင်း
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ “မိတ်” ဝန်ဆောင်မှုမှကြိုဆိုပါတယ်…. အခုတလော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့အတွက် ပို့စ် (post) လေးတွေတင်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မဖြစ်သေးတဲ့မေမေအလောင်းအလျာလေးတွေ မေမေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ ပျိုမေလေးတွေ အတွက် ပို့စ်(post) လေးတစ်ခုတင်ပေးချင်ပါတယ်… အမျိုးသမီးအများစုသိချင်ကြတဲ့ ခဏခဏလည်းမေးကြတဲ့ မမျိုးဥကြွေတာ ဘာလဲဆိုတာနဲ့ မမျိုးဥကြွေတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ… မမျိုးဥကြွေတယ်ဆိုတာ သန္ဓေအောင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့မမျိုးဥလေးက သားဥအိမ်ထဲကနေထွက်လာပြီး သားဥပြွန်တစ်လျောက်ဆင်းလာကာ သန္ဓေတည်ဖို့ အဖိုသုတ်ပိုးကောင်လေးကိုစောင့်နေတာပါ… အမျိုးသားဆီကသုတ်ကောင်လေးနဲ့ပေါင်းပြီး သန္ဓေသားလောင်းလေးဖြစ်ကာ သားအိမ်နံရံမှာတွယ်ပြီး နောက်ဆုံးသန္ဓေသားအဖြစ်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာပါတယ်… အရွယ်ရောက်ပြီးမျိုးပွားနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာ ရာသီသွေးလစဉ်လာသလိုပဲ မမျိုးဥကလည်း သားဥအိမ်ကနေ တစ်လတစ်ခါထွက်လာပါတယ်… သားသမီးလိုချင်တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ မမျိုးဥကြွေတဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသားနဲ့တူူတူနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်… ဒါဆိုမမျိုးဥကြွေတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ??? မမျိုးဥကြွေတာကိုစစ်တဲ့ကိရိယာလေးနဲ့စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။တစ်ချို့အမျိုးသမီးတွေမှာရာသီသွေးပေါ်ပြီးသားဥမကြွေတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဆီးစစ်တယ်ဆိုတာက ဆီးထဲမှာ LH ဟော်မုန်းဓါတ်ပါမပါကို စစ်တာပါ။ LH ဟော်မုန်းဓါတ်က မျိုးဥကြွေတာနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်ပါတယ်။ ဆီးထဲမှာ LH ဟော်မုန်းပါမပါစစ်ခြင်းဖြင့် သားသမီးရနိုင်မရနိုင်သိနိုင်ပါတယ်။ ဆီးစစ်ရမည့်အချိန် ----- ...
သားသမီးယူမည္ဆိုလ ွ်င္ August 2, 2018 မ်ိဳးမေအာင္ျခင္းကို ကုသလို႔ ရႏိုင္ပါသလား
“မ်ိဳးမေအာင္ျခင္းကို ကုသလို႔ ရႏိုင္ပါသလား” သားသမီးရတနာ ရယူလိုသူ ေမာင္နွံမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းကို မၾကာခဏ သိလိုတတ္ၾကပါသည္။ မ်ိဳးမေအာင္ျခင္း ( သို ့) သားသမီးရတနာမရရွိနိုင္ျခင္းကို အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကုသ၍မရႏိုင္ပါ ။ ကုသျခင္းဟာ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ေနပါတယ္….. ၁) ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ (ဥပမာ – ေရာဂါတစ္ခုုေၾကာင့္) ၂) ဘယ္ေလာက္ၾကာေနၿပီလဲ ၃) အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ သူ၏ အမ်ိဳးသား/လင္ေယာက်ာ္း၏အသက္ ၄) စားေသာက္ေနထိုင္မႈပံုစံ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ကုသျခင္း? ၁။ စားေသာက္ ေနထိုင္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲရပါမည္။ ေဆးလိပ္ ၊ အရက္ ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရပါမည္ ။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အတူေနသည့္အခ်ိန္ (လိင္ဆက္ဆံျခင္း)ကို ယခင္ကထက္အႀကိမ္ေရတိုး၍လုပ္ေပးရမည္။ …